ကျွန်ုပ်တို့၏ဘွဲ့နှင့်အစီအစဉ်များကိုရှာဖွေပါ။ » Hodges University
ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးသင်တန်း
မင်းဘာရှာနေတာလဲ ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါ။ အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်များထဲမှတစ်ခုကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ပရိုဂရမ်များစာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်အောက်သို့ scroll လုပ်ပါ။
အားလုံး စာရင်းကိုင် အပေါင်းအဖေါ် လကွောငျးသယျပို့ဆောငျရေး AWS အကယ်ဒမီ လူပျို စီးပွားရေး လက်တွေ့စိတ်ကျန်းမာရေး ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ကွန်ပျူတာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေး သွားဘက်ဆိုင်ရာကူညီခြင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်း EMS အင်္ဂလိပ်သည်ဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်သည် အင်္ဂလိပ် Grammar အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အသားပေး ဘဏ္ဍာရေး ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးသင်တန်း ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်များ ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Hodges Connect ကို Hodges တိုက်ရိုက် Hodges သူရဲကောင်းများ Interdisciplinary လေ့လာရေး ရုံအချက်အလက်များ ဥပဒေရေးရာလေ့လာရေး တစ်သက်တာသင်ယူ စီမံခန့်ခွဲမှု စျေးကွက်ရှာဖွေရေး မာစတာ သူနာပြု အွန်လိုင်းလမ်းညွှန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးလက်ထောက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး စိတ်ပညာ နည်းပညာ လွှဲပြောင်းခရက်ဒစ် Friendly ဘွဲ့ကြိုလက်မှတ်များ
မကြာမှီလာမည်! Hodges သွားဘက်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်းမှုအစီအစဉ်သည် ၀ ယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားသောသွားဘက်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရေးနယ်ပယ်တွင်ကြီးထွားရန်လိုအပ်သည့်ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ Career Onestop ၏အဆိုအရသွားဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီသည် ၂၀၂၆ တွင်ဖလော်ရီဒါတွင် ၂၃% တိုးတက်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ပထမနေရာမှာရှိပါ။ သင်နှင့်အတူကြီးထွားလာမယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုရှာနေမယ်ဆိုရင်…
အိမ်ဝယ်ရန်အသစ်လား။ ဒီအလုပ်ရုံမှာမင်းရဲ့ဘဝရဲ့အရေးအကြီးဆုံး ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါသင်ရွေးချယ်သင့်တဲ့အရာအားလုံးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနှင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လျှောက်လှမ်းသွားပြီးအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။
Direct Support Professional (DSP) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖော်ပြချက် - ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အစီအစဉ်ဖြင့်သင်သည်ဥာဏ်ရည်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများ (Autism, Down Syndrome နှင့်အခြားအရာများစွာ) ရှိသူများအတွက်တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်သင်သင်တန်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်အသိအမှတ်ပြုပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်အတူလက်တွေ့နှင့်တိုက်ရိုက်လေ့ကျင့်မှုအတွက်လက်မှတ်များရလိမ့်မည်။ သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်…
HU Direct မှကြိုဆိုပါ၏၊ Hodges တက္ကသိုလ်မှ Express ဌာနခွဲသည် Hodges University မှဒေသတွင်းနှင့်အခြားဒေသများတွင်လိုအပ်သောလုပ်သားအင်အားညွှန်ကြားချက်နှင့်ဘွဲ့များကိုပေးသည်။ နယ်ပယ်များတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘဏ္financeာရေးတို့ပါဝင်သည်။ ကျောင်းသားများသည်ကျောင်းဝင်း၊ အွန်လိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာစွမ်းရည်တိုးတက်သောစာသင်ခန်း (TEC) မှအတန်းတက်နိုင်သည်။
Amazon Web Services (AWS) အကယ်ဒမီတိမ်တိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းများသည် AWS ၏ ၀ ယ်လိုအားရှိသည့် cloud computing ကမ္ဘာသို့သင်၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ယနေ့လျှောက်ထားပါ။ သွားဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအစီအစဉ်၏ Hodges Connect ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားသောသွားဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီနယ်ပယ်တွင်စတင်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ Career Onestop ၏အဆိုအရသွားဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီသည် ၂၀၂၆ တွင်ဖလော်ရီဒါတွင် ၂၃% တိုးတက်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ Program ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဤပရိုဂရမ်သည်အသစ်ရောက်ရှိခြင်းကိုသိရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
အခြေခံမှအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အထိအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါပုံစံများကိုနားလည်ရန်အတွက်အစီအစဉ်တကျစနစ်ဖြစ်သော Hodges တက္ကသိုလ်၏အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Self-paced အွန်လိုင်းပရိုဂရမ်သည်သဒ္ဒါကိုနားလည်ရန်နှင့်အင်္ဂလိပ်စကားကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောဆိုရန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်သောအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ နာမ်များ၊ ကြိယာများ၊ ဝါကျများတွင်သင်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုရယူပါ။
သင်၏ဘွဲ့ကြိုလက်မှတ်ကိုစတင်ပါ Hodges တက္ကသိုလ်မှ Hodges တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ကြိုလက်မှတ်များသည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထူးသင်တန်းများနှင့်တွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့အတွက်လိုအပ်သောအဓိကခရက်ဒစ်များကိုကျော်လွှားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှတ်များကို online 100% ပေးပြီးသင်အားခွင့်ပြုပါသည်။
Hodges Connect ကို။ အစစ်အမှန်ဘဝကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူစစ်မှန်သောအသက်တာအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေး & လေ့ကျင့်ရေး။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောပထမ ဦး ဆုံးကြီးကြပ်သူတွင်အသုံးချနိုင်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ။ လူများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားအဓိကဆက်သွယ်မှုရှိခြင်း။ သင်၏ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုစွမ်းရည်သည် ၀ န်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဤပထမလိုင်း ...
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးလက်ထောက် CAPTE အသိအမှတ်ပြုသင်တန်း။
အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ (EMS) - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ
အွန်လိုင်းဒီဂရီ Programs ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များမဖြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်သားအင်အား Driven Bachelor ဒီဂရီနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်။
Hodges U. မှပရိုဂရမ်များသာလျှင်သာမာန်အချက်အလက်များ၏ Master Degree Programs